January 11, 2018 | Dunida24.com
Afayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya C/casiis Cali Ibraahim “C/casiis Xildhibaan” oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay cafis u sameyn doonto Siyaasiin mucaarad ah oo Dowladda ka soo hor-jeeda. Afayeenka ayaa sheegay mas’uuliyiinta amniga ee Hay’adaha Dowladda isku afgartayn in la siiyo cafis siyaasiin mucaarad ah oo Dowladda ka soo horjeeda,hadii ay mar dambe u laabtaan falal la xariira qaran Dumis-nimo ay Dowladda talaabo ka qaadi doonto. Sidoo kale wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa sheegtay in aysan jirin cid ka sareysa sharciga, sidaas darteedna ay…
Waxaa goor-dhaw madaafiic ay ku soo dhacday meel u dhaw madaxtooyada Soomaaliya waxaana ka dhashay khasaaro dhaawacyo ubadan. Madaafiicda oo gaareysa ugu yaraan 3 Hoobiye ayaa ku soo dhacday meel u dhaw Guriga ay ku shaqayn jirtay Xukumada Ra’iisal Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar C/rashiid iyo kuwii ka horeeyay oo ku yaala Albaabka madaxtooyada Soomaaliya. Sidoo kale Madaafiicda ayaa ku dhacday Ex fiyoore oo ku dhaw Madaxtooyada Soomaaliya, ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhaawacntay waxayna wararka qaar ay sheegayaan in ay jirto dhimasho soo gaartay dad shacab oo Guryahooda…
Wararka aan helnay ayaa sheegaya in maamulka Jubbaland ay nolal iyo geeri ku raadinayaan Taliyihii Ciidamada Booliiska Jubbaland ee magaalada Kismaayo oo muddo ka hor la waayay. Taliyahaan oo magaciisa lagu soo koobay Maxamed Naasir ayaa la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay howlo dhex-dhexaadin ah u joogay deegaanka Diif ee gobalka jubada Hoose waxaana la socda Ciidan kale kuwaas oo sidoo kale aan lla heynin nolal iyo geeri sida ay noo sheegeen dadka deegaanka. Saraakiil ka tirsan Booliiska Jubbaland iyo qaar ka mid ah saraakiisha Ciidamada Milatariga Soomaaliya ee jubooyinka…